အလှူငွေလိမ်လည်မှုများဖြင့် သတင်းကြီးနေသူ Qing Minya( ရှင်မင်းယာ) | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« စစ်အုပ်စုရဲ့စကားတွေကို ယုံကြည်နေကြသေးတဲ့သူတွေကိုပဲ အံ့သြရမှာပါ
ဖွတ်ကြားတို့ကြပ်ပြေးနယ်မြေ ♪ ♫ ♩ ဖွတ်ကြားတို့ကြပ်ပြေးနယ်မြေ »
Myanmar News Update ·
facebook တခွင်အလှူငွေလိမ်လည်မှုများဖြင့် သတင်းကြီးနေသူ Qing Minya( ရှင်မင်းယာ) နှင့် နောက်ဆက်တွဲသတင်းများ
ရွှေမြန်မာအပေါင်းတို့ခင်ဗျား။ကျနော် ခုတလော အမျိုးသားရေးအမည်ခံ စစ်ခွေးအလိုတော်ရိ Qing Minya( ရှင်မင်းယာ) ၏ လူမှုရေးဖေါက်ပြန်မှု / ဆာရာဝမှ မြန်မာတို့အတွက် ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကောက်ခံသော ငွေများ လိမ်လည်မှု များကို ရွှေမြန်မာများသိနိုင်စေရန် ဖော်ပြခဲ့သည်။၎င်း ဖော်ပြမှုများသည် ဖွသတင်းများမဟုတ်ပဲ ခိုင်လုံသော သတင်းများသာဖြစ်ကြောင်း သိစေအပ်သည်။
Bug Lab ၏ တင်ပြ ဖော်ထုတ်မှု ကို အောက်ပါ Link တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်သည်။
အပုချေ ( မာန်အောင်ကျွန်း )””
This entry was posted on January 9, 2014 at 4:19 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “အလှူငွေလိမ်လည်မှုများဖြင့် သတင်းကြီးနေသူ Qing Minya( ရှင်မင်းယာ)”
[…] အလှူငွေလိမ်လည်မှုများဖြင့် သတင်းကြ… […]